Barnaamijkii Radio Xoriyo ka baxay 01 November 2008 waxaa ka kooban yahay:
Waxyeellooyin gumaysigu u gaystay dadwaynaha
28/10/08 Dudumo-cadka dagaal culus oo ka dhacay waxaa ciidammada gumaysigu loogu gaystay khasaare ballaadhan oo faahfaahintiisa aanaan wali halin.
24/10/08 dagaal adag oo ka dhacay Garawo, oo Dhagaxbuur ka tirsan, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay ugu yaraan 22 askari, waxaa sidoo kale lagaga dhaawacay 16 askari.
19 - 20/10/08 waxaa weerarro mir ah lagu qaaday ciidammo gumaysigu leeyahay oo ku kala sugnaa War-lahow, Cadaley iyo Cali Fidhe, oo Shaygoosh ka tirsan, waxaana lagaga dilay inta la ogyahay 2 askari, 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/10/08 Laas-dhonqil, oo degmada Dhuxun ka tirsan, waxaa weerar gaadmo ah loogu gaystay ciidammo gumaysigu leeyahay, kuwaasoo la gaadhsiisyay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
Isla 19/10/08 waxaa weerar mir ah loo gaystay ciidammo gumaysigu leeyahay oo ku sugnaa Higlaley, oo Dhagaxbur ka tirsan, waxaana la gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
18/10/08 Magaalo-cad meesha lagu magacaabo dagaal ka dhacay waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 3 askari, 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
17/10/08 Wiji-waaji, oo Shaygoosh ka tirsan, waxaa labo mar lagu weeraray ciidammo gumaysigu leeyahay oo halkaas ku sugnaa, waxaana la gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
16/10/08 ciidammo gumaysigu leeyahay ayaa weerar gaadmo ah loogu gaystay Gora-xaas, Ban-bas ka tirsan, kuwaasoo la gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
Isla 16/10/08 Tuulo-Qadhawo waxaa ciidammada gumaysiga lagaga gubay 1 Baabuur oo Uuraal ah, waxaana halkaas ku bas-beelay Baabuurkii iyo askartii saarnayd oo 50 gadhaysa. Waxaa sidoo kale halkaas ku baaba’ay hubkii ay askartaas wateen oo dhan.
15/10/08 dagaal isaguna ka dhacay Korayo, oo Fiiq ka tirsan, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 5 askari, 8 kalana waa lagaga dhaawacay.
12/10/08 dagaal ak dhacay Waafdhuug waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 5 askari, 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
10/10/08 dagaal ka dhacay Haloobiyo, oo Baabili ka tirsan, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 2 askari, 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
03/10/08 Ugunje, oo Dhuxun ka tirsan, dagaal ka dhacay waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 1 askari, 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
Ciidammada gumaysiga ayaa dhibaatooyin, oo isugu jira dil, jidhil, xidhay iyo dhacba, u gaystay dadwaynaha rayadka ah ee Ogaadeenya. Dhibaatooyinkan, oo ka dhacay meelo kala duwan oo Ogaadeenya ka mid ah, waxay u dhaceen sidatan;
24/10/08 waxay ciidammada gumaysigu Waafdhuug ku dileen nin shacab ah oo lagu magacaabi jiray Xasan Miskiin.
21/10/08 waxay ciidammada gumaysigu magaalada Higlaley, oo Dhagaxbuur ka tirsan, ku dileen nin darawal ah, waxay sidoo kale dhaawac u gaysteen 2 dumar ah.
26/10/08 Koore, oo Awaare ka tirsan, waxay cidammada gumaysigu ku xidhxidheen afar qof oo shacab, waxaanan magacyadooda helnay;
1- C/llaahi Ismaaciil iyo
2- Cabdi Shukri Carab
Sidoo kale 26/10/08 Maraacaato, Qabridaharre ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen 12 qof oo shacab ah oo magacyadooda aanaan wali helin.
25/10/08 magaalada Dhagaxbuur waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen seddex nin oo ka tirsanaa adeegayaashooda, waxayna kala yihin;
1- Maxamuud Dalab
2- Mukhtaar Galool iyo
13/10/08 magaalada Qabridaharre waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen;
1- Muraayad Yuusuf
2- Dugsiiya Macalin Maxamed iyo
3- Ayan Cali daahir
11/10/08 Korayo, oo Fiiq ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen, ka dib markii ay xoolo ka dhaceen, Aqallana ka gubeen, dadka kala ah;
1- Xasan-cadde Maxamuud Cali, oo ay 7 Adhi ah ka dhaceen, 1 Aqalna ka gubeen
2- Wayrax Cabdi Xashi, ooy 6 Adhi ah ka dhaceen, 1 Aqalna ka gubeen iyo
3- Shuun Axmed Aw Aaden, ooy 7 Adhi ah ka dhaceen, 1 Aqalna ka gubeen
09/10/08 Qabridaharre waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen siddeed qof oo shacab ah oon magacyadooda ka hayno;
2- C/kariin Maxamed Kaahin
3- Ganni oo magaciisa oo buuxa aanaan haynin iyo
4- Shaafi oo isagana aanaan magaciisa oo buuxa haynin
06/10/08 Tuulo-gacandhi, oo Qabridaharre ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu lacago kala kaga dhaceen dadka kala ah;
1- C/llaahi Gurar, ooy 900 oo Bir ka dhaceen iyo
2- C/salaam Ibraahim ooy isagana 600 oo Bir ka dhaceen
05/10/08 magaalada Qabridaharre waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Axmed Xasan Fijaan iyo
2- Asad Cabdi Shakuur
02/10/08 Galadiid waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen shan qof oo kala ah;
1- Axmed Carab Shakuul
2- Xuseen Cabdiqani iyo
3- Xasan Siyaad
04/10/08 Ceel-wayne, oo Dhanaan ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu jidhdil ba’an ugu gaysteen Xaaji Cali Abshir
03/10/08 Duud-dhoorre, oo Gidhibka ka tirsan waxay ciidammada gumaysigu sidoo kale jidhdil ba’an ugu gaysteen ninka agu magacaabo Ayaanle Wad-sagaaro
10/08/08 magaalada Qabridaharre waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen oo waliba lacago baad ah ka qaateen dadka kala ah;
1- Guddi Omas, ooy 10,000 oo Bir ka dhaceen
2- Xasan-cadde Aardood, ooy isagana 10,000 oo Bir ka dhaceen
3- Xasan Muxumed Dool ooy 1500 oo Bir ka dhaceen
4- Rage Cabdi Sh Khaliif ooy 1500 oo Bir ka dhaceen
5- C/xakiin Maxamed ooy isagana 1500 oo Bir ka qaateen
6- Dayib Faarax Axmed ooy 3000 oo Bir ka qaateen
7- Mukhtaar Macalin Aaden ooy 2500 oo Bir ka qaateen
8- Suleekha Cabdi Wali ooy iyadan 3000 o Bir ka dhaceen iyo
9- Hinda Sh Carab ooy iyadana 2000 oo Bir ka dhaceen.